Xusuusta Jumlada Xumbo U Qaabeeyaha qoorta barkimada soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Meibaoli
Xusuusta xumbo U Shaaf Neck Barkinta
Muuqaalka xayawaanka kartoonka, oo ay soo dhoweeyeen carruurta.
Xusuusta udub dhexaadka xusuusta, maaddada aaminka ah, cufnaanta sare iyo soo noqoshada gaabiska ah, ur la'aan, sun lahayn.
Raaxo, neefsasho, jilicsan iyo maqaar saaxiibtinimo leh.
Cabir: 28 * 25 * 15cm
Daboolka: Velvet ama Customized
Cutub: Xumbada Xusuusta
Muuqaalka Kartuunka: barkinta kursigan waxay qabataa astaamo majaajillo qosol badan - Xayawaanno Firfircoon oo la kulmi doona xiisaha carruurta.
Dabool Raaxo leh: Daboolida saxarada wareega wareega ah ee laga saari karo waxay ka samaysan tahay maro jilicsan, jilicsan oo laastik ah, waaraya oo neefsan kara, anti-pilling, maqaar-saaxiibtinimo leh oo raaxo leh inaad ku fadhiisato, oo ku habboon inta badan wareegyada alwaax ama biraha lagu qurxiyo iyo alwaax wareegsan ama bir ah. kuraasta qurxinta
Xumbada Xusuusta Tayada Sare ： Barkimadeena waxaa laga sameeyaa xumbada xusuusta saafi ah waxayna u isticmaashaa kuleylka jirkaaga inaad ku xoqdo gooladahaaga. Waxay kaa caawineysaa hagaajinta muuqaalka waxayna bixisaa taageero markaad fadhido muddo dheer. Jilicsan oo haddana adag, barkimadeennu waxay la jaanqaadaysaa wareegyada jirkaaga si loo abuuro si dhab ah loo habeeyay.
Si ballaaran loo isticmaalo - Waxaa loo isticmaali karaa carruurta quudinta, sawiridda iyo qorista, ama ciyaarta. Naqshadeynta isafgaradku waxay sidoo kale ku habboon tahay bixitaanka iyo ku saabsan makhaayadaha ama joogitaanka habeennimo. Naqshad isku dhafan, oo ku habboon in lagu isticmaalo guriga ama loo baxo maqaayadaha ama joogitaanka habeenkii.
Ha dhigin xumbo barkin hoostiisa qorraxda tooska ah ee dhalaalaysa, waayo qorraxdu waxay saameyn ku yeelan doontaa jilicsanaanta xumbada.
Kadib furitaanka xirmada, kahor intaadan isticmaalin, waxaa lagugula talinayaa inaad barkinta dhigatid meel qabow oo hawo leh 3-5 maalmood.
1. Miyaad bixin kartaa barkin barkimo hurdo xumad xasuusta ka duwan?
Haa, waxaan soo saari karnaa barkin hurdo xumbo xasuus badan. Waxaan ku aqbalnaa macaamiisha cufnaanta iyo jilicsanaanta muunad u gaar ah oo loogu talagalay tixraaca.
2. Ma isticmaali karaa sumadeyda gaarka ah?
Haa, waanu kuu samayn karnaa sumadda gaarka kuu ah. Badanaa, sumadda gaarka loo leeyahay waxaa sidoo kale loo yaqaannaa calaamadda dhinaca, sheeg magaca calaamadda iyo soosaarida alaabada fudud.
3. Ma habeyn karaa baakadeyda gaarka ah?
Haa, waxaan u sameyn karnaa xirxirida iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
4. Ma heli karaa muunad aan ku tijaabiyo tayada amarka weyn?
Waa caadi in aan soo qaadno muunad. Qiimaha muunada waxaa laguugu soo celin doonaa dalabkaaga rasmiga ah ee rasmiga ah gorgortan.
Hore: Barkimadda Taageerada Qoorta Gawaarida iyo Barkinta Lumbar
Xiga: Xusuusta xumbo Desktop Nap barkinta
Qaansada Qaab Memory xumbo barkin
Xusuusta xumbo Baby Barkinta Hurdada
Barkimadda Taageerada Qoorta Gawaarida iyo Barkinta Lumbar